ေစ်းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ား | iMyanmarHouse.com
မင်္ဂလာဈေးတည်ဆောက်မှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး
[Unicode] မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ထဲက မင်္ဂလာဈေးကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်နေမှု ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ငါးဆယ်ကျော်ပြီးစီးသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ၎င်းမင်္ဂလာဈေးကြီးကို ဆန်းမြတ်ထွန်းကုမ္ပဏီက ပုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိူးတူ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်ကာ PPP(public-private partnership)စနစ်နဲ့ ၁၅...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းရှိ မြေဧက ၁၆၀ ကျော်ရှိ စင်ကာပူ Samanea လက်ကားဈေးကို နိုဝင်ဘာတွင်ဖွင့်လှစ်မည်
[Unicode] ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိမြေဧက ၁၆၇ တွင်တည်ဆောက်ထားသည် စမားနီးယား ရန်ကုန်အဆင့်မြင့် လက်ကားဈေး ''(Samanea Yangon Market)လက်ကားဈေးသစ်ကြီးကို ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်သည်။ ကိုဗစ်ကြောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်နှောင့်နှေးနေသည့်...
ဗဟိုဘဏ်က ပြင်ပဈေးကွက်သို့ ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ သန်းကို အမြင့်ဈေးဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချပြီးနောက် ဒေါ်လာဈေးတက်...
### Unicode Version ### ရန်ကုန်- ဗဟိုဘဏ်က ပြည်ပဈေးကွက်သို တစ်ဒေါ်လာ ၁၄၄၈.၁ ကျပ်ဖြင့် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ သန်းရောင်းချပြီးနောက် ပြည်တွင်းငွေဈေးကွက်အတွင်း တစ်ဒေါ်လာ ၁၄၅၀ ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည်မြှင့်တက်လာသည်။ COVID-19ကြောင့် ဈေးကျဆင်းနေသော အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကွက်တွင် ဧပြီ ၇ ၇က်က...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသတ်သမား COVID-19 ဘယ်လိုစပြီး ဘယ်တော့ပြီးဆုံးမှာလဲ?
### Unicode Version ### မတ် ၃၁ အထိ သတင်းပေးပို့ချက်များအရ COVID-19 ခေါ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လူ ၈ သိန်းကျော် ကူးစက်ခံထားရပြီး ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်က ၃ သောင်း ၈ ထောင်ကျော်ကို သေဆုံးစေခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဘယ်လိုစတင်ခဲ့တာလဲ? ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည်...
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ဈေး (၈) ခုကို ပုဂ္ဂလိက စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်မည်
### Unicode Version ### ရန်ကုန်မြို့ ရှိ အစိုးရပိုင် ဈေးရှစ်ဈေးကို ပုဂ္ဂလိကစီမံခန့်ခွဲခွင့် (Market Operator) စနစ်ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်သည်။ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ နှင့်ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများက ဧပြီ ၂၁ ရက်မှ စတင်ပြီး...
မန္တလေးမြို့ မင်္ဂလာဈေးသစ် စီမံကိန်းဧရိယာသတ်မှတ်
### Unicode Version ### မန္တလေးမြို့ မင်္ဂလာဈေးသစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းဧရိယာကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၉ ရက်က သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ မင်္ဂလာဈေးသစ် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့်...
### Unicode Version ### ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် ၊ အမှတ်(၈၈)ဈေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်စီစဉ်ထားအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဆိုပြုသည့် မြေနေရာတွင် အဆင့်မီဈေး တည်ဆောက်ပေးရန် မသင့်ပါကြောင်း မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးက ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅ ရက်က ဒုတိယအကြိမ်...
### Unicode Version ### အဆင့်မြင့်မင်္ဂလာဈေးသစ် တည်ဆောက်မှုနေမှုတွင် မြေညီထပ်အပေါ်ပိုင်းလေးလွှာအား ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီးလာမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီ၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှသိရသည်။ ဈေးသစ်တည်ဆောက်သည့်စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း...
### Unicode Version ### လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်က မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဈေးကို လပိုင်းအတွင်း စတင်ဆောက်လုပ်မယ်လို့ မင်္ဂလာဈေး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင် ကပြောပါတယ်။ အရင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ...